Lamatra : nisokatra ny taom-panjonoana | NewsMada
Lamatra : nisokatra ny taom-panjonoana
Miverina misokatra ny 1 janoary teo ny taom-panjonoana lamatra (langouste) ho an’ity taona ity, nikatona nandritra ny telo volana (oktobra-desambra 2015). Nampiharina ity fepetra ity, nanomboka ny taona 2013, entina iarovana ny fitomboana ahafahan’ny makamba manatody sy manaranaka.
Efa manana fe-potoam-panjonoana toy izao koa ny karazana trondro sy hazandranomasina hafa. Toy ny makamba (crevette), manomboka ny 1 desambra ary mifarana ny faran’ny volana febroary.
Toraka izany koa ny an-dranomamy, indrindra ireo farihy lehibe. Roa volana ny faharetany, ka nikatona ny 15 oktobra ary nisokatra ny 15 desambra ny farihin’Itasy, raha nikatona ny 15 novambra ny any Alaotra ary hisokatra amin’ny 15 janoary 2016. Fahita any amin’ireo toerana roa ireo ny trondro tilapia vaventy, karazana barahoa.
Ankoatra ireo, misy koa ny famerana ny fe-potoana tsy azo anjonoana, isaky ny kaominina samihafa, arakaraka ny karazana hazandrano. Toy ny fanjonoana horita, any Ambodivahibe, distrika Antsiranana II, nakaton’ny Vondrona olona ifotony ny 3 desambra 2015, ary hisokatra ny 3 febroary 2016 (telo volana).